Fepetra ilaina amin'ny mariazy am-piangonana | Bezzia
Fepetra ilaina amin'ny mariazy any am-piangonana
Susana godoy | | fampakaram-bady
Raha mieritreritra hankalaza a fampakaram-bady, angamba fanontaniana maro no tonga ao an-tsainao. Aza matahotra anefa fa eto izahay hamaha azy ireo. Ny karazana lanonana tsirairay avy dia manana fepetra takiana izay tsy maintsy tanterahina. Noho izany dia marina fa mety miovaova ny sasany, saingy hampahafantarina anao koa izany rehetra izany.
Mba hankalazana mariazy any am-piangonana dia mila mankany amin'ny paroasy izay tiantsika hankalazana azy. Satria ny dingana voalohany dia miresaka amin'ny pretra ary avy eo ho tonga mihodina ny zava-drehetra. Fa eny, tsy maintsy ataonao mialoha hatrany izany, hahafahanao manomana taratasy rehetra. Aza adino izay manaraka!
1 Fihaonana amin'ny pretra
2 Inona avy ireo antontan-taratasy ilaina
3 Ireo vavolom-panambadiana ataon'ny fiangonana
4 Aorian'ny mariazy
Fihaonana amin'ny pretra
Ny dingana voalohany tokony hataontsika dia ny miresaka amin'ny pretra. Ho an'izany dia mila manatona ny fiangonana ao amin'ny paroasintsika isika na amin'izay tiantsika mankalazà ny mariazinay. Azo antoka fa any izy ireo dia efa nilaza taminao fotoana vitsivitsy mba hahafahana miresaka amin'ny paroasy paroasy. Ny zavatra tsara indrindra dia ny afaka mifanao fotoana, milaza fa hanambady ianao ary te-hametraka azy amin'ny fomba ofisialy ny antsipiriany rehetra. Satria izy no hilaza aminao izay antontan-taratasy tokony hoentinao any aminy. Ny tena marina dia amin'ny ankamaroan'ny diosezy dia mitovy ny fepetra takiana. Fa na izany aza, araka ny lazainay, tsara kokoa ny manontany mivantana amin'ny pretra. Farafaharatsiny farafaharatsiny, aleonao miresaka aminy momba ny 6 na 8 volana alohan'ny mariazy. Fa raha iray amin'ny antoko hafa ny iray amin'ireo antoko dia ho lava kokoa ny fotoana.
Inona avy ireo antontan-taratasy ilaina
Kopian'ny DNI an'ny roa tonta.
Ny taratasy fanamarinana amin'ny Batisa. Izany dia angatahina ao amin'ny fiangonana nanaovana batisa anao.
Taratasy nahaterahana. Mba hanaovana izany, mila mandeha any amin'ny Registra sivily amin'ny faritra misy anao ianao.
Ny toerana sasany dia mila fanamarinana tokana ihany koa.
Mazava ho azy mialoha ny fanambadiana. Ny paroasy sasany dia manolotra taranja vitsivitsy ho an'ny mpampakatra, izay matetika atao mandritra ny faran'ny herinandro ary karazana lahateny. Amin'ny fiafaran'io dia homena karazana fanamarinana izy ireo.
Raha manambady sivily ianao dia tsy maintsy mitondra ny taratasy fanamarinana izay mampahafantatra anao.
Ireo vavolom-panambadiana ataon'ny fiangonana
Rehefa avy niresaka voalohany tamin'ny pretra ianao dia hanomboka ny fanomanana ireo taratasy ilaina rehetra. Volana vitsivitsy aorian'ny fihaonana voalohany sy amin'ny mariazy akaiky indrindra dia tsy maintsy atao izany mitondra vavolombelona roa ary miverena amin'ny fotoana voatondro miaraka amin'ny pretra. Amin'ity tranga ity dia tsara kokoa hatrany ny mitondra namana roa fa tsy misy olona ao amin'ny fianakaviana. Izy io dia fivoriana izay anontanian'ny mompera matetika mandra-pahoviana no nifankahalalanareo ary miresaka momba ny finamanana sy ny firaisana amin'ny ho avy izy ireo. Araka ny lazainay hatrany dia miankina amin'ny pretra resahina ny zava-drehetra, saingy tsy kabary tsy maharitra loatra izany.
Aorian'ny lanonana fampakaram-bady, hanao sonia ny taratasy izahay. Tsy zavatra an'ohatra foana ny maka sary, fa tena hataontsika ara-dalàna ny fanambadiana. Na dia natao ho ara-dalàna tanteraka aza izany dia hanana vanim-potoana 8 andro hahafahantsika manolotra ireo taratasy voasonia ao amin'ny Registra sivily. Arak'izany dia voarakitra an'io andro lehibe io sy io firaisana io.
Raha mahita mariazy any am-piangonana isika dia toa sarotra kokoa, raha ny amin'ny fanaovana antontan-taratasy, noho ny tena izy. Satria rehefa niresaka tamin'ny pretra ianao dia hazavainy tsara ny dingana tokony hataonao. Matetika ny taratasy dia voahodina haingana, noho izany dia tsy mila miodina imbetsaka ianao. Ny pretra no ho solontena ambony indrindra ary manana fahefana, amin'ity raharaha ity. Noho izany dia mila manana ny takiana rehetra ianao handroso amin'ny fampakaram-bady mihitsy. Mikasa ny hanambady any am-piangonana ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » fampakaram-bady » Fepetra ilaina amin'ny mariazy any am-piangonana
Ahoana ny fomba fihinanana sakafo ara-pahasalamana any amin'ny birao
Salady Surimi miaraka amin'ny kôkômbra sy katsaka